Ambatondrazaka-Moramanga: mandeha ny asa fanajariana ny lalana RN44 | NewsMada
Ambatondrazaka-Moramanga: mandeha ny asa fanajariana ny lalana RN44
“Mandeha izao ny asa fanajariana ny lalana RN 44 Atsimo, avy eo Ambatondrazaka mankany Moramanga ; RN 44 Avaratra, Ambatondrazaka-Vohitraivo”, hoy i Honomanana Raymond Albert, lehiben’ny sampana Asa vaventy sy tetezan’Alaotra-Mangoro. Ny hita any an-toerana, ireo ampahan-dàlana ratsy sy mora simba no misy orinasa mampiasa milina lehibe manatanteraka ny asa fanajariana, toy ny ao Ranofotsy, Ambohimanga.
Nambaran’ity tompon’andraikitra ao amin’ny minisiteran’ny Asa vaventy ity fa efa eo an-dalam-pifantenana ny orinasa hanajary ny RNT 23A izao ny fanjakana, mampitohy an’i Moramanga sy Anosibe an’Ala, distrika hadinodino amin’ny lafiny rehetra. “Efa somary diso aoriana ihany vao mihetsika… satria ny orana efa mirotsaka !”, hoy ireo mpandeha tao anaty takisiborosy. Ary raha lafiny hafa ny antony nampihetsika, mbola diso fotoana be ihany koa, raha ny fahitan’ny mpanao politika sasany azy.
Na izany aza, nivaky ity tompon’andraikitra ity nanaiky fa “… kely loatra ny tetibola omena ho fanajariana ireo làlana ireo. Satria tapitra avy hatrany, tsy misy ny tetibola ho fanajariana ny lalana ato amin’ny faritanin’i Toamasina raha atontona hanaovana io lalana mankany Anosibe an’Ala io fotsiny”.